कोरोना महामारीका कारण डिभी परेका २६०० नेपाली पनि अमेरिका जान नपाउने ! « Etajakhabar
कोरोना महामारीका कारण डिभी परेका २६०० नेपाली पनि अमेरिका जान नपाउने !
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार १६:१५
काठमाडौं । अमेरिकाले हरेक वर्ष डाइभरसिटी भिषा (डिभी) खुला गर्छ । यो वर्ष पनि डिभीको रिजल्ट सार्वजनिक भइसकेको छ । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण डिभी परेकाहरु पनि अमेरिका जान नपाउने भएका छन्। अमेरिकाले आप्रवासीहरूलाई सन् २०२० को अन्त्यसम्म नै प्रवेशमा रोक लगाएपछि डीभी लोटरी परेका नेपाली पनि अमेरिका जान नपाउने भएका हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको आदेश पछि अमेरिकाले यो नियम लागू गरेको हो । अमेरिकी सरकारले सन् २०२० को अन्त्यसम्मका लागि कामदार भिसा र अधिकांश आप्रवासी भिसामा रोक लगाएको छ । जसका कारण सन् २०२० का लागि डिभीमा छनौट भएका नेपालीहरूले पनि भिसा नपाउने भएका हुन् ।
उनीहरुले आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मा भिसा पाइसक्नुपर्ने नियम भएपनि यो वर्ष कोरोनाका कारण परिवर्तन भएको छ । डिभी परेर अमेरिका जान तयार भएर बसेका नेपालीहरुले डिसेम्बरको अन्त्यसम्म लगाएको आप्रवासन रोकले भिसा नपाउने निश्चित भएको छ ।
काठमाडौं। गायक निशान भट्टराईले विवाह गरेका छन् । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा मंगलवार निशानले प्रेमिका ऋचा